नेपाल आज | वल्लीको डायरी : बदलिदो समाजको चरित्र चित्रण
वल्लीको डायरी : बदलिदो समाजको चरित्र चित्रण
पहिलो पटकको भेटमै अंगालोमा बेरियौं । हुन त केहि दिनयता फेसबुकको म्यासेन्जरमा अलिकलि कुराकानी हुँदैछ ।
मृदु मुस्कानका साथ स्वागत गरिन् मलाई पाना क्याफेमा । आस्मा बहिनीको साथमा औपचारिक रुपमा भेट्न गएको पहिलो पटक हो । किनकिन पहिलो भेटजस्तै लागेन उनीसँगको भेट । यद्यपि हामी फेसबुकमा साथी रहेछौँ । तर कुराकानी हुँदैनथ्यो । यूट्यूवमा आस्मा बहिनीले सुनाएको वल्लीको डायरीले उनीसँग भट्ने हुटहुटी पलायो ।
कफी अर्डर गर्यौ । आलु पनि अर्डर गर्यौ । क्याफेमा उनी व्यस्त ग्राहकहरूको आवतजावत बाक्लै थियो । कर्मचारीहरु थिए तर उनी कफी पिउँदापिउदै ग्राहकमा ध्यान पुर्याउँथिन् । कफी पिउँदै मन साटासाट गर्यौं ।
'सबै उस्तै भेटिएछौ है हामी' मैले भने 'त्यसैले त कुरा मिलेछ', एकैछिन खुसी मिसाएर हाँस्यौं ।
आस्मा बहिनीले बाहिरको उज्यालो संसार देख्न सक्दिनन् तर भित्री मनको उज्यालो यती धेरै छ कि उनी स्वयं दिव्य प्रकास हुन् । त्यसैले बोलाउने नाम पनि दिव्या । मलाई उनीसँगको प्रत्येक भेट ऊर्जाशिल लाग्छन् ।
पहिले कार्यक्रममा भेट भएको थियो होला तर यसरी नजिक भएर भेट भएको पहिलो पटक ।
कुरैकुरामा मैले मनिषालाई सोधेँ 'कतै तपाई नैं त होइन वल्ली ?' उनले मसँग आँखा जुधाउदै भनिन् 'होइन सयमा एक प्रतिशत पनि होइन । तर तपाई पहिलो होइन अन्जना जी यस्तो प्रश्न गर्ने । वल्लीहरु हाम्रो समाजमा छ्प्याछ्प्ती भेटिन्छन् ।'
कति दिनदेखि जिज्ञासाले भरिएको मेरो खुल्दुली कति सहज रुपमा पानी प्यास मेटिएझैं मेटिएको । कुराकानीकै क्रममा मैले भनें 'म लमजुङ जानु छ', अलि व्यस्त छु । उनले भनिन् 'म डडेलधुरा जानुछ ।'
आस्मा बहिनीले चाँजोपाँजो मिलाउने र संयोजनको जिम्मा लिने भएपछि हामी उडुवा पंक्षीहरु हिड्यौं आफ्ना गन्तव्यतिर, पछि भेट्ने बाचासहित ।
बाहिर पानी दर्किदै थियो । साँझ पर्दै थियो । मिठो गफलाई विट मारेर छाता खोलेर ओढ्दै बाटोतिर पाइला सार्दै आस्मा र मनिषालाई बाइबाइ गरें ।
को कहाँ गएर कोसंग ठोकिन्छ बुझ्नै गाह्रो । उसो त उनी मुस्ताङमा जन्मिएकी चेली, म लमजुङमा । जन्मको हिसावले छिमेकी जिल्ला भएता पनि आज आएर यसरी भेट हुनु, अनौठो लाग्छ यो जीवन पनि । झन् बुझ्यो झन् झन् कठिन । तर कस्को निधारमा कहाँ गएर टुटिलो उठ्न परेको छ र टुटुले भनेर चिनिनु परेको छ कसलाई के थाहा ?
उसो त मनिषा त्यती चर्चा रुचाउँदिनन् पनि, उनी कर्मशिल भएर बाँच्न रमाउँछिन् । कथाकी गरिव परिवारकी नायिका वल्लीले पनि फिल्ममा जस्तै गरेर अमेरिकाबाट आएको धनी केटालाई अचानक बसमा भेटाएकी थिइन् । चिनाजानीमै प्रेम बस्यो ।
परिवारको राजीखुसीमा उनीहरुको केहि दिनमा नैं लगन गाँठो धुमधामसंग कसिन्छ, वल्लीको सिउँदो रंगिन्छ । डेढ महिना नेपाल बसेर धन, मन र तन हरेक कुराले तृप्त पारेर आफ्नी आमाको साथमा वल्लीलाई छोडेर नायक अमेरिका फर्कन्छ ।
वल्ली सती सावित्री र असल गृहिणी भएर, सासुको स्याहार गरेर बस्छिन् । घनको घमण्डले माइती र आमालाई समेत गरिव भनेर हेला गर्छिन् ।
ससुरा बितिसकेका रहेछन् र भएको एक्लो छोरा पनि अमेरिका भासिएपछि उनी मात्र साहारा थिइन् सासुको । तिनै सासु पनि पागल जस्ती भएर छतबाट हामफालेर बितेपछि उनी विल्कुल एक्ली हुन्छिन् ।
साथीको संगतमा पर्छिन् तर उनीहरु सबै सहि हुँदैनन् । विदेशीएका पतिहरुका पत्नीहरु कसरी रक्सी, चुरोट र जुवातासमा झमेर सम्पत्ति, घरपरिवार कसरी सखाव पार्छन् भन्ने कुरा देखिन् । अस्मिता भन्ने साथीको मृत्यु पछि उनको आँखा खुल्छ ।
कयौं वर्षसम्म नेपाल नआएको पतिको यादले मनोरोगी जस्ती हुन्छिन् । तर माइतीको राम्रो संस्कारमा हुर्केकी उनले आफ्नो अस्मिता गुमाउदिनन् ।
माइतीको सहयोगले अमेरिका पुग्छिन्, एयरपोर्टमा भेटिएका नेपालीले उनका पतिको बासस्थान खोजिदिन्छन् । जब उनले कयौं वर्षसम्म बेवास्था गर्ने, फोन नम्वर पनि नदिने पति भेट्छिन् । तर जब पतिको चरित्र देख्छिन्, बीक्षिप्त बनेर पतिलाइ छोडेर एक्लै नेपाल फर्किन्छिन् ।
वल्लीले बुझ्छिन् कि उनी प्रयोग भएकी रहिछन्, उस्को आमाको स्याहार गर्ने बलियो नोकरको रुपमा ।
उपन्यासलाई पूर्ण रुपमा महिलावादी भन्न सकिन्छ । तर विषयवस्तुले यसरी छुन्छ कि पुरुष पनि पैसाको लागि आफ्नो शरीर बेच्दैछन् ।
समाज, देशको जुन अवस्था छ, यूवती मात्र होइन यूवा पनि कोही अरबको खाडीमा पसिना बेच्दैछन् । कोहि अमेरिकामा शरीर बेच्दैछन् ।
कहिलेसम्म यूवा बेचिइरहने हँ ? कहिलेसम्म काठको बाकसमा नेपाल फर्कने जनताका छोराछोरी ? कहिलेदेखि जनताका छोराछोरीले आफ्नो देशमा, आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारसँगै रमाउने ? कहिलेसम्म हिंसा र आंतकको अन्त्य हुने ?
वल्लीको डायरी पढ्दापढ्दै मुटु भक्कानियो । आँशु बगे परेलीबाट अनायासै, डायरी भिजाउँदै । मनभरी अनेक प्रश्न उठिरहें ।
वल्लीको डायरीले बदलिदो समाजको चरित्र चित्रण गरेको छ । र अनायसै मुखबाट निस्किन्छ अब नेपालमा यस्ता वल्ली र वल्लीका लोग्ने कुन दिन, कुन युगसम्म जन्मने ?